Petrozavodsk State University - Study muRussia. EducationBro
guta : Petrozavodsk
Musakanganwa kuti kurukura Petrozavodsk State University
Kunyoresa pana Petrozavodsk State University
University PetrSU rakaumbwa 1940 sezvo Finnish-Karelian University uye vakawana zita rayo ndiripo 1956. Kugara kwayo munhoroondo-gore 75 PetrSU rava pakukura yunivhesiti iri North-European chikamu Russia uye vakadzidziswa kupfuura 60000 vadzidzi. It zvinobudirira rinobatanidza dzekare dzidzo uye dzinokosha sayenzi pamwe itsva zvisarudzo muminda yepamusorosoro yesayenzi budiriro.
PetrSU ane akakurumbira alumni wandei, kusanganisira yokufeva enyika uye vadetembi. Zvinonzi nguva dzose rikaiswa pakati yakanakisisa mumayunivhesiti yeRussia maererano kuera siyana (GreenMetric World University chepamusoro - nzvimbo 2nd pakati 100 yakanakisisa mumayunivhesiti muRussia; «Interfax» uye «Ekho Moskvi» akazvimirira National Rating ari internalization muboka - 3rd nzvimbo, etc.)
The University chatinokoshesa 8 Zvivako muguta rose uye unoshanda ane Botanic mubindu, mumwe pool «Onego», mumarabhoritari anoverengeka uye imba kuzivisa. raibhurari Its chinobatanidza dzinokwana kunhivi 1.4 mabhuku miriyoni. PetrSU iri muna Petrozavodsk, asiwo ine bazi Apatity, guta riri Murmansk nharaunda.
Today kupfuura 14800 vadzidzi vanopinda zvidzidzo siyana Rokutenderwa, girajuweta uye post-akapedza kudzidza zvirongwa. Vanodzidziswa pamusoro chiuru mapurofesa, kusanganisira 550 PhDs, 145 Doctors Sayenzi, 26 nhengo mamiriro zvikoro sayenzi.
Yunivhesiti rinoumbwa 80 madhipatimendi, 9 mano, 7 Kudya dzidzo uye 8 tsvakurudzo Kudya.
Mupiro guta REGION
Yunivhesiti anoita basa guru mukuita dzidzo yepamusorosoro nyore kuvanhu vaigara outland mumaruwa yakarwiwa panzvimbo inonzi Karelia uye pedyo inoti. dunhu ose inonzi itungamirirwe fakaroti kana akatanga uye vadzidzi kubva mumataundi maduku kana mumisha anogona kushandisa ive dzidzo mushandirwi anotsigirwa. Vadzidzi kubva Petrozavodsk zvikoro, lyceums uye dzokurovedza muviri zvinogona kupinda pre-payunivhesiti kurovedzwa wakananga yavo yemberi munda yezvidzidzo.
PetrSU anotora chikamu pakuronga uye kuitisa Yakabatana State bvunzo (KUSHANDISA), iyo yave huru chimiro kudzidza bvunzo muzvikoro uye chikuru chimiro yavaizofanoshandisa bvunzo mu Africa muRussia kare 10 makore. Yunivhesiti dzimba Regional SHANDISA Center, izvo kurongedza kuongororwa zvabuda uye rinopa paIndaneti enyaradzo vadzidzisi uye vadzidzi.
PetrSU ari vakaziva tsvakurudzo muzinda muminda mapurogiramu, iT, tsvakurudzo yeplasma, microelectronics, masvomhu, Physics, sayenzi yezvokurapa, bhayoroji, nhoroondo, philology, sayenzi dzezvematongerwo enyika, mutemo, dzezvoupfumi, kuvaka, foresitiri, kurima. Kupfuurisa 60 zvenharaunda, dzakawanda Misangano inoitwa gore negore, pamusoro 300 ehurumende uye akazvimirira oga-mari chirongwa muminda sayenzi dzidzo yaitwa, uye dzakawanda monographies, mabhuku okuchikoro uye Bhuku rekushandisa dzinobudiswa.
INTERNATIONAL mushandirapamwe / VAMWE
Kwemakore PetrSU kwave chaizvo pamusoro dzakawanda munhandare. Today kupfuura 200 Vadzidzi dzakawanda kubva USA, Europe, China uye dzimwe nyika kudzidza payunivhesiti, uye 10 mapurofesa kubva kunyika dzakasiyana kutongodzidzisa PetrSU.
Pane 6 zvirongwa tenzi ari mutauro Chirungu kufamba muna 2015: «Network Services uye Systems», «Okufananidza Social Policy uye Welfare», «Public Health», «Tourism Management», «Nordic Studies: mutauro, Culture uye History »uye« Spintonics ». Rokutenderwa vadzidzi vanogona vasarudze tsvimborume kana nyanzvi kuti dhigirii.
The University ane 87 kushingaira dzomunyika zvibvumirwano 27 nyika (Finirendi, Siwidheni, Noweyi, Furanzi, Jerimani, Putugaro, nyika dzakabatana, United States of America, Kanadha, Bherujiyamu, Korea, nyika kuBaltic nharaunda, etc.) uye dzakawanda Exchange nepurogiramu vari kufamba pamwe 20 mumayunivhesiti vatorwa. 30 dzakawanda zvirongwa dzinoitwa gore negore chete nemari zvakasiyana-siyana dzemarudzi mari, zvirongwa nemasangano (US, EBRD, USAID, CRDF, IREX, DAAD, CIMO).
PetrSU International zviumbu inosanganisira Institute of International Chirongwa, EU Center Barents Region muRussia, International Summer University, International Programming nyanzvi Training Center, PetrSU Metso Center, PetrSU Nokia Center uye PetrSU Ponsse Center. Institute purogiramu dzakawanda mudzimba Atlantic uye Asia Cooperation Center, European Union Information Center uye International Education Center.
The yunivhesiti pamwe UNESCO, University kweArctic, Joint Working Group on Education uye Research the Barents Euro-Arctic Region, National Board musi Education muFinland, International Association of Finno-Ugric Africa, Association of Open zvakagadzirwa FRUCT, Barents Peace Education Network.
Three Language Centers kuyunivhesiti zvinopa mukana zvakaitika zvinotevera miedzo mutauro:
turf (Test wokuRussia sezvo Foreign Language)
TOEFL (Muedzo Chirungu somunhu Language Foreign)
machira (Muedzo Legal Chirungu Unyanzvi)
ACCOMODATION FOR INTERNATIONAL KWEVADZIDZI
Vadzidzi International vane akawanda pekugara kusarudza kusarudza kubva, pakati izvo flats nokuda rendi, hotera / hostel dzimba kana vapenyu mune imwe mhuri nehondo. The rinofarirwa kupfuura nzira Zvisinei ndiyo dhomitari mudzidzi. PetrSU ane 10 dhomitari muzvivako akapararira guta. Yunivhesiti hauna huru kembasi, asi zviri nyore kusvika kubva ose dhomitari Via mabhazi. Zvivako All vane internet access, lounges uye dzimba kudzidza, gyms. Vanokurudzirwawo vakapakata washing machine uye Stoves.
Institute of Languages ​​Foreign
Institute of History, Political uye Social Sciences
Institute of Forestry, Engineering uye Construction Sciences
Institute of Environmental Management muna European North
Institute of High anorapa achishandisa mitemo Technologies
Institute of Education uye Phycology
Institute of Physical Education, Sport uye Tourism
Karelian Regional Institute of Management, Economics uye Mutemo PetrSU (KRIMELTE)
Institute of International Chirongwa
Rorusununguko Mining uye zvemaumbirwo
Rorusununguko Mathematics uye Information Technologies
Rorusununguko Ecology uye Biology
Preparatory weVadzidzisi Vedare
Nemhaka kwakarongeka basa fakaroti uye nevamwe vashandi yunivhesiti, pakutanga 1970 simba Karelian-Finnish State University akava chaizvo muna Republic of yakarwiwa panzvimbo inonzi Karelia uye yose kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenyika.
mu 1973 Mikhail Shumilov akava Rector mutsva kuyunivhesiti. Aine miteva muna History, akanga ichinyatsozivikanwa monographs ake pamusoro penhoroondo yakarwiwa panzvimbo inonzi Karelia uye European North.
mu 1975 mumwe Department chitsva Accounting akazarura paUniversity sezvo chikamu School of Mathematics uye Physics. Chikuru Chikonzero kuvhura dhipatimendi ichi chaiva kushaya vanokwanisa maakaundendi uye nezvoupfumi muna yakarwiwa panzvimbo inonzi Karelia. Kirasi rokuzvidavirira vadzidzi vokutanga kudzidza muna 1979 uye yaisanganisira 52 vaduku unyanzvi. mu 1980 Chikoro pamusoro Economics yakavhurwa. Chaiva madhipatimendi matatu: political upfumi, chizvidavirire uye upfumi basa, uye sectorial upfumi. The wedhipatimendi School rokutanga raiva S. N. Polyakov uye 1982 akanga yakatsiviwa A. G. Rusakov
Kuwedzera kukurumbira of University pakati vanotarisira vadzidzi, madhipatimendi uye zvikoro zviri University akaisa yakawanda nesimba kuparadzira mashoko pamusoro yunivhesiti iri yakarwiwa panzvimbo inonzi Karelia uye pedyo munzvimbo. Mukuwedzera, nhamba kwokurovedza chaiyo kosi (vanopinza pamusoro 1,800 people) dzakatangwa. University vadzidzisi vakaronga misangano vokusekondari apo vaitaura pamusoro mikana vadzidzi kuti awane kuyunivhesiti. Vanonzi “Open Door Days” dzakatangwa nguva dzose. Semagumo, makwikwi kuti kubvuma rakakura anenge 2.3 vadzidzi por iripo slots.
Special ngwariro rwakabhadharwa kuna kuvandudza pakati padanho mudzidzisi zvinodiwa. Vadzidzisi zvino aigona kutora mamwe zororo kuti awane tenzi uye doctorate (miteva) madhigirii. The University aiva 40-50 girajuweta vadzidzi nerimwe gore.
In 1970 vainyatsotarisirwa akanga akabhadharawo kune hwokugadzira kwemashoko kuyunivhesiti. mumakirasi misere akashongedzerwa kuratidza mafirimu uye mumakirasi vaviri vakava mutauro mumarabhoritari. Computer mumakirasi vakanga upgraded uye rudzi rwechitatu makombiyuta ES-1022 uye ES-1035 vakanga yakaiswa.
PetrSU aiva mumwe okutanga mumayunivhesiti kuti chinozoiswa ane Integrated purogiramu USSR Ministry Dzidzo Yepamusoro rinonzi “ICS-University”. Kuti uvandudze basa kuyunivhesiti, vaongorori yunivhesiti vakatanga kuwanda-software enyika kusanganisira “Entrant”, “Nhamba yevadzidzi”, “chiitiko”, “Current kuzvidzora”, “Social enyika tsika,” “Graduate mudzidzi,” “Kuzvidzora chisarudzo Implementation”, uye “Human Resources Staff”.
Kubva pakutanga kwe ma1970 kusvikira 1985, anenge 14300 vadzidzi kudzidza payunivhesiti.
Unoda kurukura Petrozavodsk State University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Petrozavodsk State University iri Map
Photos: Petrozavodsk State University pamutemo Facebook
Petrozavodsk State University wongororo
Join kukurukura pamusoro Petrozavodsk State University.